Ezezimoto - Clickfor.net | Ibhulogi Yezihambeli | Thumela ibhulogi yesivakashi
Kwangathi 3, 2022
Iyiphi i-6bt Cummins Ekulungele Ukushintsha Kwakho?
Injini engu-6-cylinder Diesel isikhule ukuduma embonini yamaloli ngoba inika ukonga uphethiloli kanye nokugibela okungcono. Cishe bonke abenzi bamaloli banikela ngezinjini zikadizili ezingamasilinda angu-6 njengokujwayelekile. Namuhla, ungakhetha kumakhulu amamodeli ahlukene wamaloli emhlabeni wonke. Ngokuya ngezidingo zakho, ungafuna ukushintshanisa amasilinda angu-6... Funda kabanzi
Mashi 28, 2022
Izici Ezinhle Eziyi-5 Zokuphepha Zemoto Yakho ngo-2022
Ungaba umshayeli ongcono kakhulu emhlabeni, kodwa awukwazi njalo ukubikezela ukuthi abanye abantu emgwaqeni bazoziphatha kanjani. Othile angakusheshisa endaweni yakho eyimpumputhe noma abhuleke ngokuzumayo lapho uzamula. Uma lokho kwenzeka, izici zokuphepha zemoto yakho zingasindisa impilo yakho. Izimoto eziningi zesimanje zinenqwaba... Funda kabanzi
Ungayenza Kanjani Impilo Yebhethri Yakho Yango-2017 ye-Honda Accord
Isilinganiso sokuphila kwebhethri lezimoto siphakathi kweminyaka emithathu kuya kwemihlanu, okusho ukuthi abantu abathenge imoto ka-2017 sebeqala ukubona isiphetho sempilo yalelo bhethri lokuqala. Uma ungakakulungeli ukushintsha ibhethri lakho le-Honda Accord, kunezindlela ezimbalwa zokuqinisekisa ukuthi uthola... Funda kabanzi
Umhlahlandlela Wokushintsha Kwesondo Eliseceleni Komgwaqo
Isondo eliphantshile lingenye yalezo zingozi zokushayela ezingenzeka kunoma ubani, noma kuphi, ngisho noma uwanakekela ngendlela emangalisayo amasondo akho. Hamba phezu kwento engalungile futhi ungazithola udinga ukuvakashela eTire Outlet, kodwa wenzani uze ufike lapho? Nansi inqubo futhi... Funda kabanzi
ukushintsha isondo, I-Tire Outlet
Umshwalense Wezimoto Ucaphuna Isikhathi Esidliwayo
Iwaranti yemoto ingaba ingxenye ebaluleke kakhulu yokuthenga imoto entsha, futhi uma kuyiwaranti enhle ingakongela isikhathi esiningi, izindleko kanye nenkinga emgwaqeni uma kunenkinga ngemoto yakho entsha. Kunezinto noma yimuphi umthengi okufanele azigcine... Funda kabanzi
Kungani Ukuhlola Amandla Ezinkuni Kubalulekile Ekukhiqizeni?
Izinkuni ziwumthombo wamandla obaluleke kakhulu futhi ovuselelekayo oqukethe ikakhulukazi i-cellulose, i-hemicellulose, ne-lignin. Ukhuni luyi-organic kanye ne-porous material. Ukuba ukwakheka kwemvelo kwemicu ye-cellulose eshumekwe ku-lignin matrix kwenza ukhuni lube namandla ngokwedlulele ekucindezelekeni nasekucindezelekeni (ikhono lokumelana nokucindezelwa). Kunezinhlobo ezimbili ze... Funda kabanzi
ukuhlolwa kwezinkuni, amalabhu okuhlola izinkuni
Isesha Inkampani Ehamba Phambili Yezokuthutha e-Bhiwandi
Uma ufuna i-flatbed engcono kakhulu noma umhlinzeki we-trailer phequlula iwebhu ngezinsizakalo Zokuthutha e-Bhiwandi uzothola uhlu olukhulu ngaphambi kwakho. Ngaphandle kwezinsizakalo zokuthutha ezifanele, ukuthola zonke izinhlobo zezinto ngeke kwenzeke. Kunezinto eziningi ezithuthwa njalo njengemishini, imifino, izithelo,… Funda kabanzi
Indlela Amakhava angaphandle angangeni manzi ayisiza ngayo imoto yakho
Uma uthenga imoto ebizayo, uzama ukuqinisekisa ukuphepha kwayo. Nokho, kule minyaka eyishumi edlule kufanele ukuthi ubone izinto ezihlukahlukene ezifana nesistimu yokukhiya amasondo ekilabhu, ama-Dash Cams, Izinzwa kanye nokhiye beTransponder. Ngokungangabazeki, lezi zinhlelo ziye zazibonakalisa futhi zenza izimoto ziphephe kakhulu kunangaphambili. Kukhona into, akukho... Funda kabanzi
Ngena Emgwaqeni Futhi Ngokushesha Ngalezi zinhlelo Zokusebenza Ezinhle Zokuthola Izingxenye Zezimoto
Ingabe imoto yakho ishoda ngengxenye futhi awunaso isiqiniseko sokuthi ungayithola kuphi noma kanjani? Yeka ukuzikhathaza ngokuthola isivumelwano ngezingxenye zezimoto! Qhathanisa kalula izindawo zokugcina izingxenye zemoto ukuze uthole izingxenye ezihamba phambili nezisetshenziswa eduze nawe ngemizuzu nje! Thola amathani ezingxenye zezimoto ezintsha nezisetshenzisiwe ezitolo ezifana ne-Advanced,... Funda kabanzi
Ukukhetha Ikhava Yemoto Yakho
Amakhava Ezimoto anikeza isivikelo semoto yakho ebizayo ngokumelene nezakhi nama-ding nama-scratches. Banciphisa isikhathi abasichitha behlanza futhi bonga imali yokulungisa upende. Yini Omelene Nayo Ukupaka ukuziqhenya kwakho nenjabulo ngaphandle kungaba nzima kukho, ngokulimala komsebenzi kapende noma ama-rings amancane noma imihuzuko. Ngisho... Funda kabanzi
1 2 3 IZITHUBA EZINDALA
Kwangathi 24, 2022
Uhlobo lwamavidiyo ongawasebenzisela ukumaketha kwevidiyo yezindlu ezithengiswayo
Ungayithenga Kanjani i-Crypto e-Ukraine?
Ungayikhetha Kanjani Isevisi Yokunakekela Utshani Obungcweti...